ILali yaseZhenbeibao yaseNtshona iBegonia B&B丨Ginkgo House iHelan MountainIsiXeko seStudio iDolophu yaseMinning丨Shahu丨I Mausoleum yaseXixia King丨1 lokulala
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguJacinda
UJacinda unezimvo eziyi-28 zezinye iindawo.
[Ukuba ufuna ukwenza i-invoyisi yendlu, nceda uhlawule i-10% yerhafu ngaphandle kweintanethi kwaye uqhagamshelane nomgcini-ndlu ukuze akukhuphele i-invoyisi ye-VAT jikelele. Iindwendwe ezibhukisha ngaphezulu kweentsuku ezingama-30 kufuneka zihlawule irenti yenyanga ezi-2 ezongezelelweyo njengedipozithi, kwaye zihlawule ezinye iifizi ezingalindelekanga njengoko zifuneka, kwaye zibuyiselwe emva kokuphuma emva kokutsalwa kweemali ezingalindelekanga.]
-Irenti yenyanga ukusuka kwi-1 inyanga ukuya kwiinyanga ezi-3, sikunika amanzi, umbane, igesi, ipropati, i-intanethi, iphakheji yephakheji ye-cable TV, ixabiso li-30% yezinga legumbi. Emva kokuba kufakwe iodolo yerenti yenyanga, umthengisi-zincam uya kuphinda asayine isivumelwano nawe kwaye aqinisekise iinkcukacha zekhontrakthi.
-Irenti yenyanga yeenyanga ezi-4 okanye ngaphezulu: amanzi, umbane, igesi, ipropathi, inethiwekhi, kunye neefizi ze-cable zikamabonakude kufuneka zihlawulwe kwishedyuli esekelwe kwimveliso yangempela. Emva kokuba kufakwe iodolo yerenti yenyanga, umthengisi-zincam uya kuphinda asayine isivumelwano nawe kwaye aqinisekise iinkcukacha zekhontrakthi.
I-Nishimura Begonia yakhiwe ngumyili owaziwayo wegadi.Isitayile soyilo siqaqambile kwaye sithungwe.Amagumbi mahle kwaye acocekile.Asebenzisa ibhedi ekumgangatho ophezulu elungiselelwe wena, inkqubo yokuhlambela ezenzekelayo, kunye nesidlo sakusasa semihla ngemihla.
UYan Hexiang, uYuan Chengjie, uJi Lingchen, uWang Jia kunye nabanye abantu abadumileyo bebedla ngokuhlala kwindawo yokudubula yeMango TV umboniso othi "Fasting Tail Box". Le yindlu yeendwendwe ekufuneka uyindwendwele abantu abadumileyo be-Intanethi xa behamba eYinchuan.
Kumgama wemizuzu emi-5 ukusuka eZhenbeibao Film and Television City, kwaye malunga nesiqingatha seyure uhamba ukusuka kwezinye iindawo ezinomtsalane ze-4A. Ikufuphi neziko lokwamkela abakhenkethi. Kukho ibhasi yabakhenkethi yokuyithatha kwaye yehla.Ungakhwela ibhayisekile ukuya phonononga okungqongileyo.
Lo mbuki zindwendwe unezimvo eziyi-28 ngezinye indawo zokuhlala. Veza ezinye izimvo
Kufutshane kufuneka-ube ezinika ziquka Zhenbeibao Western Film and Television City, uhambo losuku olunye-to Minning Town, Suyukou National Forest Park, Helan Mountain Rock Ukupeyinta Reserve, Western uKumkani Ingcwaba xia, Sand Lake, Huangsha Ferry Ancient, Helan Mountain Wine Cultural Corridor, Idolophu eshushu yaseNtwasahlobo, iShapotou, iMarike yasebusuku yaseHuaiyuan, njl. Ukufumana indawo ezijikelezileyo ezi-4 zokhenketho kunye nokucwangciswa kwendlela yokhenketho, nceda uqhagamshelane nomgcini wendlu wethu.
Umbuki zindwendwe ngu- Jacinda
Njengoko kukho iipropathi ezininzi phantsi kolawulo, andinakukwazi ukukunika iingcebiso zokudlala, kodwa ndinethemba elikhulu lokuba njengendawo, ndingakunika iingcebiso ezininzi zokudlala kunye nokutya, ke ukuba ufuna iingcebiso. , ungenza uthabathe inyathelo qha mna (o ^ ^ o)
Ukuba unayo nayiphi na imiba yococeko, nceda uqhagamshelane nathi ngexesha
Njengoko kukho iipropathi ezininzi phantsi kolawulo, andinakukwazi ukukunika iingcebiso zokudlala, kodwa ndinethemba elikhulu lokuba njengendawo, ndingakunika iingcebiso ezininzi z…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Yinchuan